सरकार भूकम्पपीडितको हरिविजोग कहिलेसम्म!
एक वर्ष दुई महिना पुग्न लाग्यो विनाशकारी महाभूकम्प गएको। तर, अझैसम्म पनि भूकम्पपीडितहरुले स्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन्। कारणहरु विभिन्न छन्। सबैभन्दा ठूलो कारण त हाम्रो सरकार नै हो भूकम्पपीडितका लागि घर बन्न नसक्नुको।
सरकारले आश देखाउँदा लाखौं भूकम्प पीडितहरु अझै आशै आशमा बसिरहेका छन्। अब फेरि भूकम्पपीडितका बस्तीहरुमा पीडा आउँदैछ, वर्षात् बनेर। अनि पीडितका घाउमा फेरि नुनचुक पर्नेछ। भूकम्पले उनीहरुको सुन्दर घर क्षणभरमै खण्डहर बनेको थियो। अब नयाँ घर बनाउनुपर्छ। सरकारले पनि अनुदान दिने भनेको छ। यही साल नयाँ घरमा सर्नुपर्छ। भूकम्पपीडितहरुले त्यसो भन्दै एक वर्ष बिताए।
तर, देश र जनता यति ठूलो पीडामा छन् कि प्रधानमन्त्रीको भाषणले लाग्छ उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ। जस्ता र पालको छानोबाट तप्पतप्प पानी चुहिरहेका बेला टेलिभिजनहरुमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भाषण सुन्दा पीडितहरुले के भन्लान्? सरकारले सबैभन्दा पहिला पीडितको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने होइन? त्यसमाथि सरकारी कामकाज यति झन्झटिलो छ कि पीडितले आवश्यक कागज तयार पार्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था छ। मेरो काँध गलेको छैन भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब भूकम्प पीडितको आँसु पुछ्न थाल्ने बेला भएन र?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, आषाढ २, २०७३ ०८:३३:१८